GNU / Linux: Nzvimbo dzeDesktop ... zvinoshamisa! izvo zvichakushamisa | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Desks, GNU/Linux, Graphics
Pane dzimwe nguva takaratidza mhando nyowani dze mamiriro edesktop, vanyori, mamaneja ewindo, vatambi, nezvimwe. Kufananidza uye zvinyorwa pane akanakisa emamiriro enzvimbo ekuparadzirwa kweGNU / Linux zvakatoburitswa. Muchikamu chino haungawane chero cheicho ...
Zvamunozoona zviri zvirongwa zvinoshamisa, mamwe akatosiiwa, mamwe ari kushanda uye aida kusimudzira mamiriro edesktop yeLinux ane maficha uye mabasa akasiyana zvakanyanya neaya echinyakare ...
1 Maze Munyori
3 Project Kutarisa Girazi
Ndicho matatu-mativi graphic munyori yeLinux iyo yakavakirwa paQt 5 magiraibhurari emifananidzo uye Wayland. Sezvauri kuona muvhidhiyo, zvinoita kunge semutambo wevhidhiyo maunofamba napo munzvimbo dzakasiyana kana maberere kwaunowana mahwindo achiratidzwa mumadziro. Iyo isingawanzo iyo inokodzera kuve pane iyo runyorwa ...
Mamwe mashoko - Github saiti
shuga ndiyo imwe yenzvimbo dzisingawanzo desktop. Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi, uye inomuka pamwe nepfungwa yekushandira yekudyidzana nharaunda nharaunda dzevana. Yakagadziriswa sechikamu cheOne Laptop pamwana (OLPC) chirongwa. Mune ino kesi yakavakirwa paGTK + uye Python (PyGTK), uye haishandise yakajairika desktop, uye haina kushandisa maforodha kana windows. Shandisa yakazara-skrini chiitiko chiitiko kuti vashandisi vatarise pane imwechete chirongwa panguva.
Mamwe mashoko - Saiti yepamutemo
Project Kutarisa Girazi
Chekupedzisira, imwe yekushaikwa mukati medesktop mamiriro inodaidzwa Project Kutarisa Girazi Uye kunyange ichisiiwa, zvichiri kushamisika. Yakanga yakanyorwa mumutauro weJava programming (uchishandisa Java 3D graphical API) uye yakatsigira Windows, Linux, uye Solaris. Iyo yemahara, pasi peGPL rezinesi, uye inotsigirwa neSun Microsystems (ikozvino Oracle). Kufanana neyekutanga, zvakare iri 3D desktop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNU / Linux: Nzvimbo dzeDesktop… zvinoshamisa!
Vakashaiwa Synphony OS